माउन्टेन प्रेरित क्याप्स साहसिक र चरम खेल! - THE INDIAN FACE
२०% अतिरिक्त छुट - कोड: FUCK20
माउन्टेन प्रेरित क्याप्स साहसिक र चरम खेल!
प्रकृतिले २०२१ मा पहाडहरूलाई निम्तो दिन्छ!
माउन्टेन खेलकुद चट्टानी, ठाडो, चिप्लो परिदृश्यमा अभ्यास गरिएको छ, यद्यपि कहिलेकाँहि अलि खतरनाक पनि छ, धेरै प्राकृतिक अवरोधहरूको साथ। त्यसकारण, केहि गतिविधिहरू गर्नु राम्रो शारीरिक अवस्था र स्वास्थ्यमा हुनु महत्त्वपूर्ण छ। खेलमा निर्भर गर्दै, यसको कठिनाई बढ्दो वा कम बढ्नेछ। यद्यपि हिमाली खेलकुद पनि युवा मानिस र बच्चाहरूले अभ्यास गर्न सक्छन्। प्रारम्भिक उमेरदेखि नै शारीरिक गतिविधिलाई स्वस्थ जीवनशैलीको लागि सिफारिश गरिन्छ, किनकि यसले हड्डीको स्वास्थ्य, मांसपेशिको बल र लचिलोपना सुधार गर्दछ। अब, जब हामी तपाईंलाई अझ पक्का विश्वास गर्छौं, यस बर्षको पहाडी खेल अभ्यास गर्न, आउनुहोस् हामी जानेका केही विषयहरू के हुन्।
माउन्टेन खेल तपाईंलाई रोमाञ्चक निम्तो दिन्छ र शुद्ध एड्रेनालाईन महसुस गर्दछ। तिनीहरू यति रोमाञ्चक छन् कि हामी तपाईंलाई आश्वस्त गराउँछौं कि तपाईं साताको अन्त्यमा हिमालहरूमा यात्राको योजना बनाउन चाहानुहुन्छ।
२०२१ मा माउन्टन खेलहरू
यदि तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ एड्रेनालाईन हो भने, नयाँ अनुभवले भरिएको २०२१ सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो हिमाल खेलहरू पत्ता लगाउनको लागि तयार हुनुहोस्!
यस सूचीमा तपाई रमाईलो गर्न र अझ सक्रिय जीवन बिताउन खोज्नेहरूको लागि गतिविधिहरू पाउनुहुनेछ, अत्यन्त चरम यात्रीहरूका लागि पनि, शुद्ध एड्रेनालाईनको लत छ। उत्साहजनक, चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण र प्रभावकारी सबै हिमाली गतिविधिहरू हुन् जुन हामी तल सूच गर्न गइरहेका छौं:
सम्पूर्ण परिवारसँग साझेदारी गर्न एक गतिविधि!
पैदल यात्रालाई सब भन्दा राम्रो हिमाल गतिविधिहरू मानिन्छ कि अवस्थित छ र अवश्य? यदि यो त्यस्तो अभ्यासहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई पूर्ण प्रकृतिमा पुग्न अनुमति दिन्छ, जबकि फुर्सतको पैदल यात्रा, ट्रेल्स, र प्राकृतिक स्थानहरूको मजा लिनुहोस् जसले तपाईंलाई सास फेर्दछ।
यो एक अभ्यास हो कि विकसित छ, एक शुद्ध खेल गतिविधि को रूप मा गरिएको बाट जाँदै, एक विशेष शारीरिक अवस्था बिना अभ्यास गर्न सक्षम हुन। पैदल यात्राले पर्यटनको क्षेत्रमा एक नयाँ रुचि खोल्यो, एक प्रवृत्ति जसले तपाईंलाई हतार बिना यात्रा र सडकको आनन्द लिन आमन्त्रित गर्दछ, तपाईंको वरिपरिको सबै कुरा थाहा पाएर। यसले तपाईंलाई मार्गहरू यात्रा गर्न र एक देशको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्ष जान्न अनुमति दिन्छ, वातावरणीय प्रभाव नलगाईकन। यो एक गन्तव्य जान्नको लागि उत्तम तरिका हो!
पैदल यात्रा एक खेल हो जुन सबैले अभ्यास गर्न सक्दछ, तपाईंले मात्र आफूले अधिक मन पराउनुहुने मार्ग छनौट गर्नुपर्दछ र भ्रमणको आनन्द लिनु पर्छ।
ट्रेकि hi हाईकिंगको समान छ, तथापि यो समान छैन, किनकि यसलाई अझ ठूलो शारीरिक अवस्था चाहिन्छ। यो यस्तो गतिविधि हो जुन धेरै दिनको पैदल यात्रामा समावेश छ, यातायातको प्रयोगबाट टाढा, दुर्गम स्थानहरूमा, पूर्ण रूपमा पृथक प्रकृतिमा।
ट्रेकिंगको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि यसले प्रकृतिलाई नोक्सान वा हानि गर्दैन, यसको विपरित, पैदल यात्रा जस्तो, यो एक गतिविधि हो जुन तपाईंलाई ग्रामीण र प्राकृतिक वरिपरिको हुन आमन्त्रित गर्दछ। कठिनाईको स्तरमा निर्भर गर्दछ जुन तपाई अभ्यास गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ धेरै वा कम लामो ट्रेल्स छन्, कम वा अधिक कठिनाइहरूको लागि जसलाई प्रयास र अधिक शारीरिक अवस्था चाहिन्छ।
यो खेल गर्न यसलाई सही उपकरणहरूसँग अभ्यास गर्न आवश्यक छ, र यहाँ हामी तपाईंलाई मद्दत गर्दछौं:
स्ट्रि :हरू: हिमाल गतिविधि हो, तिनीहरू परिदृश्य हुन् जहाँ भूभाग ठाडो छ, जुन अझै गाह्रो छ। त्यसकारण, डोरीहरू यो खेल पूरा गर्न आवश्यक तत्व हुन्।
कम्पास: प्राकृतिक सेटिंग्समा कम्पास बोक्नु आवश्यक छ ताकि अभिमुखिकरण हराउने स्थानमा, जहाँ कुनै साइनपोष्टिंग छैन।
उपयुक्त कपडा:खेल अभ्यास गर्न यो मौसमको हिसाबले उपयुक्त र सबैभन्दा आरामदायक लुगा लगाउन सधैं महत्त्वपूर्ण हुन्छ। लामो यात्राका कारण हामी आरामदायक जुत्ता लगाउन बिर्सनुहुन्न।
अन्य आवश्यक भाँडा: तपाईले गर्न चाहानुभएको मार्गको योजना बनाउन यो महत्त्वपूर्ण छ। रात बिताउनु भएको खण्डमा, पालुवा र अन्य भाँडो हाइड्रेट र फिड ल्याउन आवश्यक हुन्छ।
ट्रेकिंगले धेरै स्वास्थ्य लाभहरू ल्याउँछ। यो हिड्ने संलग्नता भएको गतिविधि हो, त्यसैले यसले कार्डियोभास्कुलर प्रणालीलाई ठूलो लाभ प्रदान गर्दछ, क्यालोरीहरू जलाउन मद्दत गर्दछ, मांसपेशिको दुखाइ रोक्छ र कम गर्दछ। प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राखी यसले मानसिक स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
अल्ट्राट्राइल एक चलिरहेको मोडेलिटी हो जुन पहाडहरूमा हुने हुन्छ जहाँ सहभागीहरूले पर्याप्त जटिल अवस्थामा 50० किलोमिटर भन्दा बढीको दूरी चलाउनुपर्दछ। यो लगभग २ hours घण्टा पनि टिक्न सक्छ, यसले अत्यन्त चरम बनाउँछ। यो सिफारिस गरिएको छ कि एक दौड सुरु गर्नु अघि, तपाईं दौडको बेला उठ्न सक्ने समस्याहरूको पूर्वावलोकन गर्न केही दिन अघि मार्गको एक जादूगरण गर्नुहोस्।
अल्ट्राट्रेइलको तयारी म्याराथनको जस्तै छ, तर केही अधिक जटिलताको साथ, पहाडको बीचमा हुँदा त्यहाँ धेरै अवरोध र प्राकृतिक अवरोधहरू छन्। तसर्थ, यो धेरै विश्वस्त हुनु आवश्यक छ र सबै भन्दा माथि अनौठो जीवन बिताउनको लागि प्रेरित र एकै समय चुनौतीपूर्ण अनुभव हो, जुन सबै शारीरिक र मानसिक अवस्थाको परीक्षण गर्दछ।
माउन्टन साइकलिंग र डाउनलोड गर्नुहोस्
साइकलिंग + हिमाल साहसिक प्रेमीका लागि उत्तम संयोजन हो! यो एक यस्तो खेल हो जहाँ विश्वभरि धेरै भन्दा धेरै एथलीटहरू सामेल हुन्छन्। माउन्टेन बाइकिले प्रकृतिमा चरम ट्रेल्समा माउन्टेनको शिखरमा पुग्छ।
जब माउन्टेन बाइकि inबाट सुरू गर्दै, यो साइजको बाइकबाट सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ जुन खुट्टाको उदयको उचाई र लम्बाइमा उत्तम सूट गर्दछ।
माउन्टेन बाइकिking एक उच्च जोखिमपूर्ण चरम खेल हो, जुन दुबै प्रतिस्पर्धी स्तरमा र शुद्ध मनोरन्जन स्तरमा दुबै बाहिर सार्न सकिन्छ। मार्ग सामान्यतया डाउनहिलमा गरिन्छ, जबकि मोडेलिटीमा निर्भर गर्दै यो अपहिल र / वा दुबैको मिश्रण पनि गर्न सकिन्छ।
यस खेलको अभ्यासको लागि एक आवश्यक तत्व हेलमेट हो। चाहे पहिलो पटक हो, वा एक पेशेवर एथलीटको रूपमा, खेल अभ्यास गर्न एक विशिष्ट हेलमेटको साथ माउन्टेन बाइकि bi मार्ग गर्ने कार्य धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
डाउनहिल हिमाल पर्वतारोहणको एक रूप हो जुन प्राकृतिक ट्र्याकमा सकेसम्म छिटो ओर्लदो समावेश गर्दछ, प्राकृतिक वा कृत्रिम बाधाहरूको साथ। यो पर्वतीय बाइक शाखाको सबैभन्दा चरम र जोखिमपूर्ण मोड मध्ये एक मानिन्छ। जटिलताहरू वा अवरोधहरू जस्तै र्‍याम्प, ड्रपहरू, ढलानहरू र उही पर्वतको प्राकृतिक कठिनाइहरू भएकोले यो विशेषता हो।
यो उतर मा 50० किमी प्रति घण्टा भन्दा बढीको वेग पुग्न को लागी एक चरम खेल मानिन्छ। त्यसकारण सुरक्षा उपकरणहरू अत्यन्त महत्त्वको हुन्छ। राम्रो दृश्यताको लागि पूर्ण अनुहार हेलमेट, उपयुक्त गणवेश, घुँडा प्याड, कुहिनो प्याड, ग्लोभ र उत्तम गुणस्तरको चश्मा प्रयोग गर्नुहोस्।
रक प्रेमीहरूको लागि, चढाई भनेको तपाईका लागि पहाडको खेल हो!
चढाई एक खेल हो जुन चढाई वा भित्तामा यात्रा गरीरहेको छ राहत वा टुप्पोमा पुग्न को लागी राहत सामग्रीको साथ वा बिना सामग्रीको सहायता। सामान्यत: ठाडो ढलानहरू वा अन्य राहतहरू समावेश गर्दछ जुन तिनीहरूको द्वारा चित्रण गरिएको छ verticality
चढाई एक पूर्ण खेल हो जसको लागि राम्रो शारीरिक अवस्था चाहिन्छ, किनकि यो एक यस्तो क्रियाकलाप हो जसलाई शरीरको पूर्ण प्रयोग आवश्यक पर्दछ: हात, हतियार, खुट्टा र ट्रंक, व्यायाम गर्नको लागि उत्कृष्ट मानसिक क्षमता सहित। पर्वतारोहीहरु आफ्नो राम्रो निपुणता र शारीरिक क्षमता को लागी प्रख्यात छन्।
त्यहाँ चढ्न को लागी विभिन्न प्रकार छन्, वातावरणीय निर्भर गर्दछ जहाँ यो गरिन्छ।
पर्वतारोहण: चट्टान भित्तेमा विकसित एक।
बरफमा: बरफमा गरेको नौ वा लामो हुन्छ।
मिश्रित आरोहण: बरफ, बरफ र चट्टानको स्ट्रेचहरू वैकल्पिक।
पर्वतारोहण: यो पर्खालहरूमा गरिन्छ जहाँ कृत्रिम बाँधहरू विभिन्न आकारहरू राखिन्छन् जुन प्राकृतिक वातावरणको ग्रिप्स नक्कल गर्दछ।
शहरी आरोहण:यो शहर, पर्खाल, पुल, इत्यादि संग संरचना संग विकसित छ।
स्की र स्नबोर्ड
स्कीइ and र स्नोबोर्डिंग हिमाल खेल, जाडो को खेल हो, ती सबै भन्दा साधारण र एड्रेनालाईन दुर्व्यसन द्वारा सबै भन्दा मनपर्ने हो। स्कीइ and र स्नोबोर्डि activities गतिविधिहरू हुन् जहाँ तपाईं हिउँसँग हिमालको मजा लिन सक्नुहुनेछ, यद्यपि यसको लागि धेरै शक्ति, तयारी र सहनशीलता चाहिन्छ।
तिनीहरू खेलहरू हुन् जुन व्यक्तिगत रूपमा अभ्यास गरिन्छ, यद्यपि तिनीहरू परिवार र साथीहरूसँग समूहमा रमाउन सकिन्छ। दुबै स्कीइ and र स्नोबोर्डिंगले विभिन्न शारीरिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक फाइदाहरू प्रदान गर्दछ:
तपाईं तनाव र चिन्ता कम:हिउँमा हुने खेलहरू हुनाले, तपाईं प्रकृतिमा बाहिरको ताजा हावा सास फेर्नुहुन्छ, तपाईंलाई नियमितबाट विच्छेदन गर्न अनुमति दिँदै।
हृदय रोगहरूबाट सुरक्षा दिन्छ:दुबै खेलहरूले रक्त परिसंचरणलाई बढावा दिन्छ र द्रुत दरमा क्यालोरी बर्न मद्दत गर्दछ। यसले अत्यधिक तौल र कोलेस्ट्रॉल समस्याहरू रोक्छ, मुटु र फोक्सोको रक्षा गर्दछ।
तपाईं राम्रो आराम:धेरै घण्टा प्रयास, व्यायाम र एड्रेनालाईन पछि शरीर थकित हुनु सामान्य हो। तपाईंसँग स्पष्ट दिमाग हुनेछ र निदाउन यो धेरै छिटो र सजिलो हुनेछ।
माउन्टन खेलहरूको लागि सिफारिशहरू
एक चोटि तपाईले सप्ताहन्तमा पहाडहरूबाट प्रकृति र ताजा हवाको आनन्द लिने निर्णय गर्नुभयो, जुनसुकै अनुशासन तपाईं खेल्नुहुन्छ, यहाँ केहि सिफारिसहरू छन्:
आफ्नै गतिमा जानुहोस्: आराम गर्नुहोस् व्यायाम गर्न समय लिनुहोस् र गतिविधिहरूको यी प्रकारहरूको लागि आफ्नो शरीरलाई सर्त गर्नुहोस्।
एक चिकित्सा जाँच गर्नुहोस्: कुन गतिविधिमा तपाईं प्रदर्शन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, निर्भर गर्दै यो सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं त्यस पलको लागि इष्टतम र आवश्यक अवस्थामा हुनुहुन्छ।
सहि उपकरण पाउनुहोस्: सस्तोमा लाग्ने उपकरणहरू प्रयोग गरेर जोखिम नगर्नुहोस्। माउन्टेन खेलकुद बाहिरी गतिविधिहरू हुन् जसमा निश्चित जोखिम वा जटिलता समावेश हुन्छ, त्यसैले यो उत्तम गुणस्तरका सामानहरू प्रयोग गर्न सधैं उत्तम हुन्छ।
आराम गर्नुहोस्: यो एक महान शारीरिक र मानसिक प्रयास को रूप मा शामिल छ, यो आराम गर्न आवश्यक छ र खेल मा पूरा प्रदर्शन गर्न को लागी सबै उर्जा बचाउन को लागी आवश्यक छ।
यदि तपाईंसँग पहाडका खेलहरू अभ्यास गर्नका लागि स्थानहरू वा अन्य क्रियाकलापहरूको लागि विचारहरू छन् भने, तिनीहरूलाई टिप्पणीमा साझा गर्नुहोस् र यो लेख पठाउन नबिर्सनुहोस् #IndianSpirits तपाईंलाई थाहा छ!
टिप्पणीहरू प्रदर्शन गर्नु अघि अनुमोदन हुनेछ।
हामी पहाडहरू र यसले प्रदान गर्ने सबै खेलहरू हामीलाई मनपर्दछ!
हिमालले हामीलाई यति धेरै प्रस्ताव गर्छ कि हामीले त्यसलाई उस्तै समान सम्मान गर्नुपर्दछ, ताकि हामी त्यस स्थानमा रहन सक्दछौं जहाँ हामी आउँदछौं र प्रवेश गर्ने क्रममा हामीले खोज्ने साँचो स्वतन्त्रताको आनन्द लिन सक्छौं।
२० events१ को हो भनेर खेल घटनाहरू!
यद्यपि २०२० ले हामीलाई हाम्रा सबै मनपर्ने खेलकुद घटनाहरू गुमाउनुपरेको छ, यो २०२१ हामी हाम्रा ब्याट्रीहरूको चार्जमा जाँदैछौं र मिति कहिले हुन्छ भनेर जान्न हामी उत्साहित छौं।
शीर्ष १० चरम खेल प्रतियोगिता र कार्यक्रमहरू
युरोप र विश्वमा सब भन्दा राम्रो चरम खेल प्रतियोगिता र घटनाहरू पत्ता लगाउनुहोस्! संसारमा धेरै साहसिक मुठभेडहरू छन्, अनौंठो र सबैभन्दा मौलिकबाट, धेरै क्लासिकसम्म,
© 2021 THE INDIAN FACE। © २०१। THE INDIAN FACE। सबै अधिकार सुरक्षित।